Izindaba - Faka i-oda lezikhathi zesibili
Faka i-oda lezikhathi zesibili
Ngolunye usuku engxenyeni yokuqala ka-2020, ngokungazelelwe sathola i-imeyili evela kukhasimende lisicela ukuthi siphinde sicaphune i-pallet engezansi futhi sitshele ikhasimende ukuthi mangaki amaphalethi angalayishwa esitsheni esingu-20-ft. Ngenxa yesipiliyoni sethu sangaphambilini, sisheshe sabala ikhotheshini yakamuva futhi sazisa ikhasimende ngomthamo wesiqukathi esingamamitha angu-20. Ngemuva kwalokho, salinda isikhathi eside.
Cishe ezinyangeni ezimbili kamuva, ikhasimende ekugcineni lathumela i-imeyili. Kwakunama-oda ama-4 ku-imeyili, futhi i-oda ngalinye linezinto ezinemininingwane, imininingwane, amanani, nezimboni zokuya khona. Kuvela ukuthi ikhasimende lihlukanisa i-oda ngokwezidingo zamafektri abo ahlukene. Yeka ikhasimende elilalelayo! Ngokuya ngalokhu, sikhiphe ama-invoice ama-4 we-proforma futhi sathumela i-PI kwikhasimende.
Ngemuva kwalokho, kwaba nokulinda okude futhi. Ngenkathi sonke sicabanga ukuthi lawa ma-oda cishe abengenathemba, ngelinye ilanga ibhange lethu lasishayela ucingo lathi kunemali evela kwamanye amazwe futhi yasitshela inani. Ngemuva kokuhlola, sithole ukuthi bekuyinkokhelo ekhishwe kusengaphambili ethunyelwe yikhasimende. Sithumele enye i-imeyili ukuze ikhasimende liqinisekiswe, futhi ikhasimende lathi liqinisekile ukuthi lizokhokha kusengaphambili. Lokho kuyintokozo evela ezulwini, ngiyabonga kakhulu ngokuxhaswa kwakho futhi!
Ngoba besilokhu silondoloza isikhunta sangaphambilini, futhi ngesipiliyoni s sangaphambilini, sahlela ngokushesha ukukhiqizwa. Kule oda, azikho izibunji zezinto ezi-3. Ngoba lezi zinto ezi-3 azithengwanga nge-oda langaphambilini, ngakho-ke savula isikhunta ngesikhathi futhi sazibeka kuhlelo lokukhiqiza ngesikhathi.
Ngenxa yesimo somqedazwe se-COVID2019, ikhasimende alikwazanga ukuza eChina ukuzohlolwa. Ngakho-ke, ngemuva kokuthi kukhiqizwe iqoqo lokuqala lamaphalishi aphansi aqediwe, sizihlole kakhulu. Imikhiqizo ekhiqizwe ngalesi sikhathi, noma ngabe inqubo yokusakaza noma inqubo yokushisela, ingcono kakhulu kunomkhiqizo wangaphambilini, ikakhulukazi ubukhulu bendawo yokusebenza bungcono kakhulu kunemikhiqizo yangaphambilini, ubulukhuni bamaphalethi athile bufinyelele kuRa1.6 noma okungcono kakhulu, okugqamile njengesibuko. Ngoba ngalesi sikhathi, sisebenzise ukunemba okuphezulu kwe-CNC lathe ukucubungula lawa ma-pallet angezansi, futhi abasebenzi nabo bangochwepheshe abaphezulu abanolwazi olunothile.
Siphinde sathuthukisa nokupakisha ukuze ukupakisha kuqine kakhulu futhi kuqinisekise ukuphepha kwethileyi eliphansi ngesikhathi sokuhamba.
Ingqikithi yale oda iyizingcezu ezingama-2940 ngokuphelele, ngesisindo esiphelele esingamathani angama-260. Kuze kube manje, sesiqede ngaphezu kwengxenye yama-oda. Sikholelwa ukuthi sizoqedela wonke ama-oda maduzane futhi silethe zonke izimpahla kumakhasimende.
Siyabonga futhi kumakhasimende ethu ngokuthembela nokusekela kwabo, sizoqhubeka nokwenza ubuchwepheshe bethu bokukhiqiza, siqhubeke nokwenza ngcono ikhwalithi yemikhiqizo yethu, futhi sikhiqize kahle futhi silethe imikhiqizo esezingeni eliphakeme kumakhasimende ethu akhona nawesikhathi esizayo.
Kade silapha sibheke phambili ekusebenzisaneni nawe ngesimo sokuwina!